WHO W E WAA Shandong Oree Laser technology Co.Ltd
Waxaan nahay shirkadda kabista ah ee Shandong group OYADE, oo ku yaalla North Jinan zone horumarinta dhaqaalaha, JiYang park warshadaha, leh 300 oo shaqaale, 1000 mitir oo laba jibbaaran cilmi-baarista iyo horumarinta xarunta, 42000 workshop mitir oo laba jibbaaran.
MAXAA AAN SAMEEYO
All qalabka, kuwaas oo lagu isticmaalo wax soo saarka ee qalabka elektarooniga ah, wareeggeedii dhafan,
qalabka isgaarsiinta, kombiyuutarada, qaybo auto, dhalooyinka iyo qaybaha indhaha, qalabka dhismaha,
qalabka caafimaadka, jewelries, qalabka baakooyinka, farsamada gacanta, fashion iyo dhar, Nuur magaalooyinka iyo Qaybaha kale.
wax soo saarka kasta oo ka Oree Laser si adag loo baaro sida ay ISO9001 caadiga ah (QCS) ka hor waxaa la saaray suuqa. Qaar badan oo taxane qalabka laser heleen CE, shahaado FDA.
Oree Laser diiradda saaraan qiimaha macaamiisha, wuxuu Abuuraa qiimaha cusotmer dheeraad ah ka xoogbadan ka badan tartamayaasha. Alaabta lagu iibiyey USA, Canada, Australia, Yurub, South Africa bari ECT, in ka badan 80 dal iyo deegaanka.